Global Voices teny Malagasy » Ondry Iray Natao Sorona Mba Hanakanana Ny Lozam-pifamoivoizana Mateti-pitranga Ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Novambra 2017 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Tsidika
Sarina ondry tao amin'ny pexels.com (CC0).
Lahatsoratra fiaraha-miasa  avy amin'ny EurasiaNet.org,  izay nosoratan'i Nurjamal Djanibekova  ity manaraka ity. Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Nanao sorona ondry iray araka ny fombafomba ireo manampahefana sy mpitondra fivavahana ao an-toerana, ao atsimon'i Kyrgyzstan tamin'ity herinandro ity ho fanantenana hanakanana ny lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga manerana ny lalambe ao amin'ny firenena.
Saimbôlika ampahany ihany ny lanonana nataon'izy ireo. Niteny ny imam iray avy ao an-tanànan'i Toktogul, ao atsimon'ny firenena, fa raha nanome ny hena ho an'ireo mpamily nandalo tao amin'ny arabe manomboka ao an-drenivohitra Bishkek, hatrao amin'ny tanànan'i Osh ny fiadidiana ao an-toerana, niangavy ireo mpamily izy ireo mba hitondra fiara am-pitandremana kokoa.
“Nanome hena ho an'ireo rehetra nandalo izahay, manazava fa avy amin'Andriamanitra ny sakafo. Nivavaka izahay mba hahalavorary ny zava-drehetra miaraka amin'ireo mpamily ireo ary niangavy azy ireo mba hitandrina eny amin'ny arabe sy hanaja ny fitsipika, “hoy ilay imam, Alipbai Boroshbayev, tamin'ny EurasiaNet.org .
Nilaza i Boroshbayev fa ireo mpitondra fivavahana sy ireo mpitarika vondrom-piarahamonina ao an-toerana no niantoka ny lany tamin'ity lanonana ity.
Nilaza ny lehiben'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ao Jalalabad, Nurlan Sarkarov fa nanohana ny hetsika ny biraony.
“Nanapa-kevitra hanatontosa ity lanonana ity araka ny fombafomba Silamo ny mponina sy ny manampahefana, hevitr'izy ireo avokoa izany. Nanao izany teny amin'ny arabe izay iandraketanay izy ireo, ka nanampy azy ireo ny polisy tamin'ny fanomezana sakafo ho an'ireo izay nijanona ary nanampy tamin'ny fanomezana torohevitra ihany koa, “hoy i Sarkarov.
Maro ireo mpitondra fiara ao Kyrgyzstan manao an-kiafina amin'ny polisy misahana ny fifamoivoizana, mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tafahoatra raha vao tsy mahita polisy. Matetika mifampilaza mialoha ireo saofera rehefa miha akaiky ny polisy mpanao fisavana, mba tsy ho voasakana. Ny fitambaran'ny fandehanana mafy, arabe ratsy sy ny fihaonan-dalana tery, indrindra ao amin'ny lalambe manavatsava ny atsimo miavaratra no hita matetika fa mampidi-doza mahafaty olona.
Nilaza i Sarkarov fa matetika voafetra amin'ny zavatra azon'izy ireo atao ny polisy misahana ny fifamoivoizana.
“Toerana tsy azonao hanaovana fisavàna fotsiny izany, tahaka ny fihaonan-dalàna tery. Saingy milaza ny fitsipika rehetra fa tsy afaka mihoatra ny fetran'ny hafainganam-pandeha eny amin'ireny toerana ireny ianao. Tsy raharahian'ny mpamily izany, ary indraindray, rendremana mihitsy aza izy ireo amin'ny alina no sady mitondra fiara,” hoy izy.
Nilaza  ny polisy misahana ny fifamoivoizana fa olona 695 no maty noho ny lozam-pifamoivoizana tao Kyrgyzstan nandritra ny 10 volana voalohany tamin'ny taona. Mihena izany raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2016, izay olona 771 no namoy ny ainy teny amin'ny arabe. Raha miresaka momba ny tarehimarika tamin'ity taona ity, nilaza ny polisy fa vokatry ny fandehanana mafy loatra no niteraka ny fahafatesan'ireo olona maherin'ny ampahatelo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/25/110778/
 Lahatsoratra fiaraha-miasa: http://www.eurasianet.org/node/86031